सयौं वर्ष पछि यो साउन महिनामा यस्तो संयोग, यी ४ राशिलाई यस्तो फाइदा (पूरा पढ्नुहोस्)
July 13, 2020 6414
नेपाली पञ्चाङ्गअनुसार साउ’न चौथो महिना हो । संस्कृ’तको श्रावण महिना अपभ्रंश भएर नेपालीमा साउन भएको हो । शास्त्रमा साउनलाई मासो’त्तम मा’स अर्थात् सबैभन्दा उत्तम महिना भनिएको पाइन्छ ।
साउनको सुरुको दिन अर्थात् संक्रान्तिलाई विशेष महत्व दिइएको पाइन्छ किनभने यसै दिनदेखि सूर्य दक्षि’णायन हुन्छ र दिन छोटा अनि रात लामा हुन थाल्छन् जुन क्रम माघेसंक्रान्तिसम्म रहन्छ ।
ज्योतिष विज्ञान’अनुसार साउन अर्थात् श्रावण महिनाको पूणिर्माका दिन आकाशमा श्रवण नक्ष’त्रको योग निर्माण हुन्छ । त्य’सैले यो महिनाको नाम श्रावण रहेको हो ।
साउन महि’नालाई पवित्र महिनाका रूपमा लिने सनातन परम्परा छ । हरिशयनी अर्थात् आषाढ शुक्ल एकादशी’देखि हरिबोधिनी अर्थात् कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्मको चार महिने अवधि’लाई चतुर्मास भनिन्छ ।
श्रावण शब्द श्रव’णबाट बनेको हो ज’सको अर्थ हुन्छ सुन्नु अर्थात् सुनेर धर्मको मर्म बुझ्नु । सनातन धर्मको प्रमुख ग्रन्थ वेदलाई श्रुति पनि भनिन्छ । श्रुतिको अर्थ नै त्यस्तो ज्ञा’न हो जुन ईश्वरबाट सु’नेर ऋषिहरूले आम मानिसलाई सुनाए ।
त्यसैले श्रावण अर्थात् साउन महिना’लाई पवित्र मानिएको हो । यसलाई आदिगुरु भगवान् शिवको पि्रय महिना पनि मानिन्छ । श्रवण नक्षत्र तथा सोमवारलाई भगवान् शिवको पि्रय महि’ना मानिन्छ । त्यसै’ले यो महिनामा शिव’लाई खुसी पार्न विशेष धार्मिक अनुष्ठान एवं रुद्राभिषेकका साथै सोमवारका दिन व्रत बस्ने गरिन्छ ।
साउन महि’नाका सबै दिन उत्तिकै पवित्र हुने भए पनि सोमबारलाई अझ विशेष मान्ने चलन छ । यसबाहे’क साउनमा नाग’पञ्चमी, मंगलचौथी, घण्टाकर्ण चतुर्दशी, जनैपूणिर्मा, गाईजात्रा आदि पर्व पर्छन् ।
साउने संक्रान्तिका दिनदेखि सूर्य मि’थुन राशि छोडेर कर्कट राशिमा प्रवेश गर्छन् । नेपालको ग्रामीण भेगमा संक्रान्तिका दिन लुतो फाल्ने परम्परा छ । सनातन धर्मावल’म्बीहरूले साउन महिनाभ:र माछा-मासु, लसुन, प्याज आदि तामसी भोजन बार्ने चलन छ ।
ज्योतिषहरुका अनु:सार सयौ वर्षपछि श्रावणमा अ’द्भु’त सं:योग बनेको छ । श्रावण महिनामा ५ सय ५८ वर्षपछि ४ वटा ग्रहको व’क्र योग परेको छ । श्रावण महिनामा योपटक गुरु, शनि, रा’हु तथा केतुको ब’क्र परेको छ । अर्थात यी ग्रह:हरुको चाल उल्टो हुनेछ ।
सिंह र कुम्भ राशि भएका:हरुलाई यो संयोग सबैभन्दा शुभ रहनेछ । ५ सय ५८ वर्ष पहिला अर्था १४६२ मा यस्तै संयोग बनेको थियो । यसको प्रभाव श्रावण महिनाभ:री रहने छ । ज्योतिषा:चार्य पण्डित मनिष शर्माका अनुसार गुरु, शनि, राहु तथा केतु चार ग्रह एक साथ बक्र रहेछन् ।
५५८ वर्ष पहि:ला पनि गुरु शनि राहु के’तु एक सा:थ श्रावण महिनामा आएका थिए । त्यस स:मय गुरु स्वयंको राशि धनुमा वक्र, शनि आफ्नो राशि मकरमा वक्र, राहुन मिथुनमा र केतु धनू राशीमा ब’क्र भएको थियो ।
४ ग्रहको ब’क्र योगले तपाईको राशिमा कस्तो: प्रभाव पर्ला ?
मेष : श्रावण’को महिनामा मेष राशि भए&काहरुको साहस र पराक्रम बढ्नेछ । सम्पर्क र सामाजिकता राम्रो हुनछ । घर परिवारमा सुख शान्ती र सहजता हुनेछ । भवन, वाह:नको अभिलाषा बढ्नेछ । कार्यक्षेत्र सँग सम्बन्धित महत्वूर्ण कामम पूरा हुनेछन् ।
वृष : वृष राशिका लागि पनि श्रावण महिना राम्रो हुनेछ । यो पटक चार वटा सफलता तर्फ वृष राशि भएकाहरु उन्मु&ख हुनेछन् ।
राम्रो आयोजनामा प्रमु’खताका साथ सहभागीता, धर्म संस्कार र अनुसन्धानमा सफता । महिना’को सुरुवातामा नयाँ साधनमा ध्यान जानेछ । वाणी व्यवहारको प्रभाव बढ्नेछ । महिनाको अन्तिममा साहस र पराक्रमले नयाँ सफलता हात पर्नेछ ।
मिथुन : श्रावण महिना केही नयाँ उपलव्धि आर्जित गर्न सहायक हुनेछ । स्वास्थ्यलाई भने ध्या’नमा राख्नुपर्नेछ । नियमअनुशासन अपनाउँदा फाइदा पुग्छ । सक्रियताको लाभ हुनेछ । प्रशासनिक काममा सपफता मिल्छ । बोल्नु भन्दा धेरै काम गरेर देखाउनुहोस् ।
महिनाको शुरुवातमा मेहन’तको बलमा अअपे’क्षित सफलता हात पर्ने छ भने उत्तरार्धमा रहन सहन र खानपानमा ध्यान दिन आवश्यक छ । यो महिनामा तपाईको निर्णय क्षमता बढ्नेछ ।
कर्कट : यो राशि भएका’हरुलाई श्रावण महिना उत्त’रोत्तर शुभकारक छ । मेहनत लगन तथा दूरदर्शी ला’गानीले अपेक्षित परिणाम दिनेछ । यी राशि भएकाले यो महिना सक्रियता बढाउनेछन् भने अनुशासनमा जोड दिनेछन् । महिनाको सुरुवातमा खर्च वृद्धि हुनेछ ।
चाप्लुसी गर्नेहरुबाट सर्तक हनु होला । उत्त&रार्धमा आर्थिक रुपमा सफता प्राप्त हुनेछ । क्रो’धलाई नियन्त्रण गर्नुभएन भने समस्या देखिने योग छ ।
सिंह : श्रावण महि’नामा तपाइएको आर्थि’क गतिविधी बढ्नेछ । क्षमता प्रदर्शनको अवसर प्राप्त हुने छ । साथीहरुको साथले काम बन्ने छ । प्रेम सम्बन्ध प्रगाढ बन्ने छ । पूर्वार्धमा करियर, जागिर र कारोबारमा तपाईले विशेष ध्यान दिनु’हुनेछ भने लाभको प्रति’फल उच्च हुनेछ ।
महिनाको अन्तिमा स्वयं र नजिकका लागि तपाईले समय निकाल्नुहुनेछ ।
कन्या : श्रावणमा कार्यक्षे’त्रमा नयाँ संभावनालाई बल दिने सम्भावना छ । पदोन्नती एवं सकारात्मक परिवर्तन सम्भव देखिएको छ ।
प्रशासनिक समस्या समाधान हुनेछन् । सम्प’त्ति सम्बन्धी कार्य पक्षमा हुनेछन् ।
तुला : धर्म मनोरञ्जनमा रुची बढ्ननेछन् । सानो प्रयास’मा पनि काम बन्ने छ । अवसरहरु आउनेछन् तर त्यसलाई ध्यान दिन जरुरी छ । यो महिनामा थप अनुशा’सन र समयको व्यवस्था’पनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
वृश्चिक : परीक्षामा सफलता प्राप्त हुने योग छ । अनुशासन तथा आत्मनियन्त्रणका सा&थ अघि बढ्न जरुरी छ । यो समयमा तपाईले मुस्किल लाग्ने कामलाई पनि सहजता पा&उनुहुनुनेछ । तर विनम्रता र काममा निरन्तरतामा कमी आउनेछ त्यसलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
धनु : यो महिना घरपरि’वारसँग सामिप्यता बढ्नेछ । साथीको भनाइलाई महत्व दिनुपर्ने देखिएको छ । दाम्पत्यमा पारदर्शिता तथा प्रेम बढ्नेछ । कुनै पनि कामका लागि राम्रो प्रस्ता&व प्राप्त हुने सम्भावना रहेको छ ।
पूर्वार्धमा करियर कारोबा’रमा व्यस्तताले सम्झौ’ताका लागि प्रेरित गर्नेछ । उत्तरार्धमा गरिमा, गोपनीयतालाई ध्यान’ राख्नुपर्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य प्रभावित बन्न सक्छ ।
मकर : निजी जीवनमा सुख बढ्नेछ । संघर्षमा सफलता मिल्नेछ । नयाँ सम्भावनालाई बल दिनेछ । व्यक्तिगत सम&स्या समाधान हुन । तपाईलाई लाभ हुनेछ । मेहनत था लगन&बाट स्वयंका लागि उचित अवसर निर्माण गर्न सक्छ ।
कुम्भ : सम्बन्धमा मधुरता प्राप्त हुनेछ । यो महि&ना साहस सक्रियता थत सटीकता बढा’उने छ । परीक्षामा सफलता, साथीहरुको सहयोग मिल्नेछ । भ्रमण र मनोरञ्जनको योछ । काम व्यव:सायमा केही मात्रामा सफता हुनेछ । पूर्वार्धमा सन्तान&को शुभ समाचार आउनेछ । स्वास्थ्य भने केही प्रतिकुल हुनेछ ।
मीन : शिक्षा प्रेम तथा सन्तान पक्ष राम्रो रहेको छ । तर घरेलु समस्यामा बादविवादमा वा बहसमा उत्रनुबाट बच्नुहोस् । अप्त्याशित असहजताबाट बच्नका लागि अनुशासन मा जोड दिन अआवश्यक छ ।
पूर्वार्धमा जिद्दी र पूर्वाग्रहबाट बच्नुहोस् । उत्तरार्धमा व्यक्तिगत प्रदर्शनमा सुधार आउनेछ । दाम्पत्य जीवन शुखमय हुनेछ । – ताजा खबर बाट साभार
Prevआज कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस् पूरा विवरण
Nextभोलि असार ३० गते मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
श्रीमतीका कारण संसार त्यागेका प्रहरी हवल्दारका आमा बुबा न्याए माग्दै मिडियामा (भिडियो सहित)
खुशीको खबर : अब जहाज`भित्रै मोबाइल र इन्टरनेट चलाउन पाइने
मेरा भाइहरुले लड्डु खाएछन्, के जिते कुन्नि, मलाई थाहा छैन : प्रधानमन्त्री ओली
जब तालुकदार मन्त्रीनै श्रम कार्यालयमा सेवाग्रही बनेर लाइन बस्न पुगे…
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (136388)
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (115405)
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, एकाएक टिक-टकमा भाईरल (भिडियो सहित) (105158)
फिल्मी हिरो हिरोइनलाई टक्कर दिने नेपाल प्रहरीको यो डान्स (हे`र्नुहोस् भिडियो) (97975)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (92800)
बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ( हृदयस्पर्शी कहानी) (85899)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (81785)
यी जोडीको टिकटकमा अनौठो हर्कत, एकाएक भाइरल बन्यो भिडियो (भिडियो सहित) (74207)